चिकित्सक दम्पती डा. किशोर प्रधानको फुर्सद मिल्दा सधैँ ‘भ्यालेन्टाइन डे’ – Health Post Nepal
२०७७ फागुन २ गते १७:१२
पछिल्लो पुस्ताका चर्चित स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. सबिना श्रेष्ठ र नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. किशोर प्रधानले पेसागत चुनौती र बाध्यतासँगै परिवारको व्यवस्थपन उस्तै कुशलतापूर्वक गरेका छन् ।
करिब पाँच वर्षको प्रेमसम्बन्धपछि विवाहबन्धन्मा बाँधिएको यो दम्पतीले आफ्नो संवेदनशील र व्यस्त अरिअरसँगै पारिवारिक जीवनलाई पनि सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको छ ।
०५३ को कुरा हो, डा. सबिना थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा मेडिकल अफिसरका रूपमा कार्यरत थिइन् । त्यहीँ नै डा. किशोरको इन्टर्नसिपको अन्तिम वर्ष चलिरहेको थियो ।
उनीहरूबीच पहिलो भेट त्यहीँ भयो । दुवैजना चिकित्साक्षेत्रमा केही गर्ने अठोटका साथ साधनामा थिए । तर, यही भेट जीवनभरका लागि सहयात्रामा परिणत भयो ।
किशोर विराटनगरका, सबिना काठमाडौंकी, जन्मस्थलबीचको दूरी लामो रहे पनि दुई मनको दूरी क्रमशः छोटिँदै थियो । कार्यथलो एकै भएका कारण विस्तारै घुलमिल हुँदै गयो ।
मुख फोरेरै प्रेमप्रस्ताव राख्नुपूर्व पनि उनीहरू वेलाबखत सँगै खाजा खाने, एक–अर्कामा चोरेर हेर्ने कुरामा अभ्यस्त भइसकेका थिए, मुख नखुले पनि सायद दुवैका मनमा एक–अर्काप्रति प्रेम अंकुराइसकेको थियो ।
त्यसलाई मुखसम्म ल्याएर व्यक्त गर्ने साहसको मात्र खाँचो थियो । यो साहस किशोरले नै पहिले गरे ।
‘उहाँले नै मलाई प्रेमप्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ सबिना सम्झिँन्छिन् । आफूले चाहेर पनि भन्न नसकेको कुरा मनले आफ्नो मानिसकेको मान्छेले भनिदिँदा सबिनाबाट अस्वीकार हुने त कुरै थिएन । दुईबीचको प्रेमसम्बन्ध अगाडि बढ्यो ।
अब आयो परिवारलाई मनाउने कुरा, जुन किशोरका लागि केही समस्या थिएन । किशोरकी आमाले छोरालाई भेट्न अस्पताल आउँदा सबिनालाई देखिसक्नुभएको थियो ।
पहिलो नजरमै सबिना आमाको नजरमा यसरी परिछिन् कि, आमाले छोरालाई ‘तिमी यही केटीसित बिहे गर’ भनिदिनुभयो । यतिवेला किशोरले सबिनालाई प्रेमप्रस्ताव राख्न भ्याएकै थिएनन् ।
सायद आमाकै स्वीकृतिको बलमा उनी सबिनाप्रति थप नजिकिएका थिए र प्रेमप्रस्ताव राख्नमा पहिलो भएका थिए । पछि सबिनाको परिवारले पनि स्विकारेपछि बिहेको निधो भयो । तर, करिअर र व्यस्तताका कारण लामो समय बिहे हुन सकेन ।
एक–अर्कामा प्रेम अभिव्यक्त गरेको १ वर्षपछि सबिना र किशोरले जीवनभर साथ निभाउने अठोटका साथ इन्गेजमेन्ट गरे । जीवनसाथीको त पक्का निधो भयो, तर अरिअर र पढाइ भने दुवैको अधुरै थियो ।
अब दुवैको अरिअर पनि पक्का गर्नुपर्ने थियो । संयोगवश सबिना बिहेपूर्व नै विदेश पढ्न जानुपर्ने अवस्था आयो । उनी विदेशमा रहँदा दुईबीच फोनमा सम्पर्क हुन्थ्यो ।
कहिले एउटाको पढाइ, कहिले अर्कोको, ४ वर्ष बित्दा पनि इन्गेजमेन्ट विवाहमा परिणत हुन सकेन । अब त अति नै भयो भनेर सबिन विदेशको पढाइ छोडेर बिहेका लागि फर्किइन् ।
‘म विदेशमा पढिरहँदा इन्गेजमेन्ट गरेको पनि ४ वर्ष बितिसकेका कारण अब त बिहे गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नेपाल आएँ,’ दुर्लभ भोगाइ सम्झँदै सबिना भन्छिन्, ‘हामीबीच १ मार्च २००२ मा विवाह भयो ।’
लामो प्रेमपछि विवाहबन्धनमा बाँधिएर सफल सहयात्रा गरिरहेका सबिना र किशोरले अहिलेसम्म ‘भ्यालेन्टाइन डे’ नै भनेर मनाएका भने छैनन् ।
प्रेमदिवसका लागि नै भनेर कुनै विशेष, छुट्टै केही योजना बनाउने नगरेको सबिना बताउँछिन् । खाली समय हुँदा कुनै वेला सँगै सपिङ जाने, खानेकुराको योजना बनाउने गरेका छन्, जसका लागि भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन ।
मनमा माया र फुर्सद भए दम्पतीका लागि सधैँ भ्यालेन्टाइन डे हुने सबिनाको तर्क छ । दुवैको फुर्सद भएको दिन आफ्ना लागि भ्यालेन्टाइन डे आएजस्तो लाग्ने उनी बताउँछिन् ।
‘भ्यालेन्टाइन डे हाम्रा लागि त्यति आवश्यक नै छैन,’ सबिना भन्छिन्, ‘समय भए हाम्रा लागि जुनसुकै दिन भ्यालेन्टाइन डे हुन सक्छ ।’
डाक्टरी पेसा, व्यस्तताले कहिले पो छोड्छ र १ दुवैजना अत्याधिक व्यस्त हुँदा पारिवारिक व्यवस्थापनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण रहन्छ । कम्तीमा दुईमध्ये एकले त केही न केही सम्झौता गर्नु नै पर्छ ।
घर–परिवारको व्यवस्थापनमा किशोरभन्दा बढी सबिनाले नै फुर्सद निकाल्ने गरेकी छिन् । ‘अलिकति मात्रै खाली समय भयो भने त्यो परिवारका लागि मिलाउने गरेकी छु,’ सबिना भन्छिन्, ‘उहाँले पनि सकभर समय मिलाउनुहुन्छ, तर उहाँभन्दा अलिकति बढी पारिवारिक जिम्मेवारी मैले नै लिएकी छु ।’
व्यस्त डाक्टरी पेसा र जिम्मेवारीबाट केही समय निकालेर बच्चाहरूका लागि दिन भने उनीहरू सकेसम्म चुक्दैनन् । ‘बच्चाहरूको बिदाको दिन कहीँ–कतै सँगै जाने र उनीहरूलाई घुमाउने गरेका छौँ,’ उनी भन्छिन् ।
स्वास्थ्य समस्या लिएर उपचारका लागि आउने जोकोहीलाई डाक्टरले खानपानको सन्तुलनमा ध्यान दिन सुझाउँछन् र यो उनीहरूको धर्म पनि हो ।
अधिकांश रोगको कारण अस्वस्थ आचरण र खानपान नै भएको मानिन्छ । तर, डाक्टर स्वयम्चाहिँ खानपानमा ध्यान दिइरहेका हुँदैनन् । यस्तो समस्या सबिना र किशोरमा पनि छ । अरुलाई नियमित ब्रेकफास्ट लिन सल्लाह दिने उनीहरू आफू भने ब्रेकफास्टका सौखिन छैनन् ।
उनीहरू एक कप कालो चियाकै भरमा काममा बिहान बिताइदिन्छन् । ‘हामी डाक्टर, अरुलाई यो खान हुन्छ, त्यो खान हुँदैन भनेर सिकाउने मान्छे, आफैँ भने त्यो कुरा पालना गरिरहेका हुँदैनौँ,’ सबिना भन्छिन्, ‘खानाको कुरा गर्ने हो भने हामी दुवैजना ब्रेकफास्टका लागि त्यति सौखिन छैनौँ । बिहान उठेर एक कप कालो चिया खाएपश्चात् दुवैजना आ–आफ्नो काममा लाग्छौँ ।’ उनीहरू डिनर भने प्रायः सँगै गर्छन् ।
बाहिरको खानामा त्यति बानी नभए पनि कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले खानाका लागि बाहिर जाने रहर गर्दा उनीहरू सहमत हुन्छन् । ‘आफ्ना लागि भन्दा पनि बच्चाहरूकै लागि हामी कहिले–कहिले खाना खान बाहिर जाने गर्छौं,’ सबिना भन्छिन् ।
सबिना र किशोर समय मिलेसम्म सपरिवार घुमफिर गर्न पछि पर्दैनन् । देशका विभिन्न भाग र विदेशमा पनि उनीहरूको भ्रमण भइरहन्छ । वर्षमा एकपटक बच्चासहित विदेश भ्रमणमा जान्छन् ।
त्यसका अतिरिक्त कहिलेकाहीँ कामकै सिलसिलामा विदेश जाँदा पनि केही समय निकालेर घुम्ने गरेका छन् । त्यति नै वेला बच्चाहरूको पनि बिदा परेमा उनीहरूसित घुम्ने समय मिलाउने गरेको सबिना बताउँछिन् ।
‘हामी वर्षको एकपटक बच्चाहरूसहित विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छौं,’ सबिना भन्छिन्, ‘उपत्यकाभित्रै पनि वेला–बखत सबै परिवार घुम्न गइरहेका हुन्छौँ ।’ यस वर्ष भने परिवारलाई त्यति समय दिन नसकेजस्तो लागिरहेको छ, सबिनालाई ।
पछिल्लो समय किशोर आफ्नै अस्पताल खोल्नमा व्यस्त छन् भने सबिना पनि आफ्नै क्लिनिकमा व्यस्त छिन् । ‘श्रीमान् आफ्नै अस्पताल खोल्न व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘म पनि व्यस्त भएका कारण यस वर्ष पहिलेजस्तो परिवारलाई समय निकाल्न नसकिएको हो ।’
पछिल्लो समय भने पारिवारिक हिसाबले पनि परिपक्व भइसक्दा रिसाएर र नबोलेर बस्नु समयको बर्बाद हो जस्तो लाग्छ, सबिनालाई । ‘आखिर नमिलीकन सुख छैन, रिसाएर के फाइदा रु’ उनी भन्छिन्, ‘सामान्य भनाभनपश्चात् हाम्रो झगडा सकिसक्छ, लामो समयसम्म रहँदैन ।’
(पहिला प्रशाकित भएको यो लेख भ्यालेन्टाइन डे दिनको पुन प्रकासित गरेका हौँ।)
डा. किशोर प्रधान
डा. सबिना श्रेष्ठ